Shinkoiwa Station (20th Nov)
20th of November , TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Shinkoiwa Station.
RTM collaborated with us this week activity for fund raising in order to support areas needed for help in Myanmar.
ယမန်နေ့ ၁၁ လပိုင်း ၂၀ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Shinkoiwa ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
နေ့လည် ၁၁ နာရီမှ ၂ နာရီ အတွင်းလက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၃၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။